Lothar Matthaus oo ka digay halista ka imaan karta kulanka Mexico ee koobka aduunka 2018 – Gool FM
Lothar Matthaus oo ka digay halista ka imaan karta kulanka Mexico ee koobka aduunka 2018
Dajiye June 16, 2018
(Russia) 16 Juunyo 2018. Kabtankii hore xulka qaranka Germany Lothar Matthaus ayaa wuxuu farxad xoogan ka muujiyay inuu ku sugnaado caasimada dalka Ruushka ee Moscow, si uu kaga qeyb galo dhacdada koobka aduunka.
“Koobka aduunka wuxuu ku bilaawday si xoogan, waxa ugu muhiimsan ilaa iyo haatan ayaa ah inuusan jirin farqi weyn, taasoo ka dhigeysa in aan la saadaalin Karin kulan kasta”.
“Maanta waxaan daawaday sida uu xulka Iceland ugu guuleestay inuu ku joojiyo halista mid ka mid ah xulalka ugu cad cad ee ku guuleysan kara koobka aduunka 2018, waxayna la galeen barbaro”.
“Sida aan idiin sheegay, waxaan ku arkay kulankii maanta iyo shaqadii adkeed uu qabtay xulka Iceland, sidaas darteed waa inaan ka taxadirnaa kulanka bari, si aan kulanka kaga bilaawano sida ugu fiican uguna adag”.
Shaxda rasmiga ah ee kulanka Croatia vs Nigeria (Xiddig muhiim ah oo keydka looga soo tagay)
Muxuu ka yiri Messi barbarihii ay la galeen xulka Iceland iyo rigooradii uu khasaariyay?